Dɛn Ne Onyankopɔn Ahenni? Adɛn Nti na Ɛsɛ Sɛ Wobɔ Mpae Sɛ Onyankopɔn Ahenni Mmra? | Bible Kyerɛkyerɛ
7 Susuw Bible nkɔmhyɛ a ɛfa Yesu ho yi ho hwɛ: “[Yehowa, NW] honhom besi no so, nyansa ne nhumu honhom, afotu ne mmaninyɛ honhom, nimdeɛ ne [Yehowa, NW] suro honhom. Na [Yehowa, NW] suro bɛyɛ no huam. Na ɛnyɛ nea n’ani hu so na obebu atɛn, na ɛnyɛ nea n’aso te so na obedi asɛm, na trenee na ɔde bebu atɛn ama mmɔboroni, na ɔde asɛntrenee adi ama asase so amanehunufo.” (Yesaia 11:2-4) Saa nsɛm no kyerɛ sɛ Yesu bɛyɛ Ɔhene a ɔde trenee ne mmɔborohunu bedi asase sofo so. So w’ani begye ho sɛ wubenya sodifo a ɔte saa?
22 Bere a Yesu ka kyerɛɛ n’akyidifo sɛ wɔmmɔ mpae sɛ, “W’ahenni mmra” no, ɛda adi pefee sɛ na Ahenni no mmae saa bere no. So bere a Yesu foro kɔɔ soro no ara na ɛbae? Dabi, efisɛ Petro ne Paulo nyinaa kae sɛ, bere a wonyan Yesu no akyi na nkɔmhyɛ a ɛwɔ Dwom 110:1 no nyaa mmamu wɔ Yesu so: “[Yehowa, NW] asɛm a osee me wura ni: Tra me nifa kosi sɛ mede w’atamfo mɛyɛ wo nan ase ntiaso.” (Asomafo Nnwuma 2:32-35; Hebrifo 10:12, 13) Ɔtwɛn kosii bere bi.
23 Ná ɔbɛtwɛn akosi bere bɛn? Wɔ afeha a ɛto so 19 ne 20 mu no, Bible asuafo anokwafo buu akontaa hui sɛ bere a ɔde retwɛn no bɛba awiei wɔ afe 1914 mu. (Ɛdefa saa bere yi ho no, hwɛ Nkekaho a ɛwɔ kratafa 215-18 no.) Nsɛm a efii ase sisii wɔ wiase fi afe 1914 reba no si so dua sɛ ntease a na Bible asuafo anokwafo no wɔ no yɛ nokware. Bible nkɔmhyɛ a anya mmamu da no adi sɛ Kristo bɛyɛɛ Ɔhene wɔ afe 1914 mu na Onyankopɔn Ahenni fii ase dii tumi. Enti, yɛte Satan ‘bere a aka a ɛyɛ tiaa’ no mu. (Adiyisɛm 12:12; Dwom 110:2) Yebetumi aka no pen nso sɛ Onyankopɔn Ahenni befi ase ayɛ adwuma nnansa yi ara ama Onyankopɔn apɛde ayɛ hɔ wɔ asase so. So asɛm yi yɛ wo anigye? Wugye di sɛ ɛyɛ nokware? Ti a edi hɔ no bɛboa wo ma woahu sɛ Bible kyerɛkyerɛ saa nneɛma yi ankasa.
Onyankopɔn Ahenni yɛ ɔsoro nniso a Yesu Kristo yɛ so Hene, na wɔayi nnipa mu 144,000 ma wɔne no rekodi ade.—Adiyisɛm 14:1, 4.
Onyankopɔn Ahenni bɛsɛe nnipa nniso nnansa yi ara, na asase bɛdan paradise.—Adiyisɛm 16:14, 16.
bh ti 8 kr. 76-85